ကိုက်လန်ကဲ့သို့ပင် ကျန်းမာရေးကို အလွန်အထောက်အကူပြုတဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်။ – SoShwe
Home/Health & Beauty/ကိုက်လန်ကဲ့သို့ပင် ကျန်းမာရေးကို အလွန်အထောက်အကူပြုတဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်။
ကိုက်လန်ကဲ့သို့ပင် ကျန်းမာရေးကို အလွန်အထောက်အကူပြုတဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်။
admin February 26, 2022	Health & Beauty Leaveacomment
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဆိုတာ ကျန်းမာရေးကို အလွန်အထောက်အကူပြုပြီး ကိုက်လန်ရွက်ဟာ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲဆိုတာ လူတိုင်းသိရှိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ အခုဆက်လက်ဖော်ပြပေးမှာကတော့ ဂေါ်ဖီထုပ်စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ရှိ ဂေါ်ဖီထုပ်ဟာ ကယ်လိုရီတွေကို လျော့ကျအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေသာမက သံဓာတ်လည်း အမြောက်အမြား ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုက်လန်ကဲ့သို့ပင် ဂေါ်ဖီထုပ်မှာလည်း တူညီတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်အနေနဲ့ ကိုက်လန်မစားပဲ ဂေါ်ဖီပြောင်းစားမယ်ဆိုရင်လည်း ဆုံးရှုံးမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဂေါ်ဖီထုပ်ကိုလည်း နေ့စဉ်စားသုံးသင့်တဲ့ အစားအစာစာရင်းထဲမှာ ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ အစိမ်းရောင်ဂေါ်ဖီထုပ်ဟာ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အထောက်အကူပြုလဲဆိုတာကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
ဂေါ်ဖီထုပ်ကို အခြားအသီးအရွက်တွေနဲ့ ရောနှော၍ဖြစ်စေ၊ သုုပ်၍ပဲဖြစ်စေ၊ ဟင်းရည်အနေနဲ့ဖြစ်စေ အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ပြီး စားသုံးလို့ရပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေဟာ အစာခြေစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ကိုလက်စထရောကို လျော့ကျစေရုံသာမက သွေးထဲက သကြားဓာတ်တွေကိုပါ လျော့ကျအောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။
နာတာရှည် နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။
ဂေါ်ဖီထုပ်ထဲမှာ Anthocyanins ဓာတ်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးမွှားများကို ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း၊ ဆီးချိုနဲ့ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေတို့ကို လျော့ကျအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း လျော့ကျအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။
ဂေါ်ဖီထုပ်မှာ Glucosinolate ဆိုတဲ့ Compound ဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့် သင့်အစားအစာပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်ရဲ့ အစာချေနိုင်စွမ်းဟာ ကိုယ်တွင်းရှိ Chemical ဓာတ်တွေမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ကျန်းမာရေးကို အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သိရှိပြီးနောက်ပိုင်း သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်အစားအစာစာရင်းထဲမှာ ဂေါ်ဖီထုပ်ကို ထည့်သွင်းထားသင့်ပါတယ်နော် . . .
ကိုက္လန္က့ဲသို႕ပင္ က်န္းမာေရးကို အလြန္အေထာက္အကူျပဳတ့ဲ ေဂၚဖီထုပ္။
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြဆုိတာ က်န္းမာေရးကို အလြန္အေထာက္အကူျပဳၿပီး ကိုက္လန္ရြက္ဟာ က်န္းမာေရးကို ဘယ္လိုအေထာက္အကူျပဳလဲဆိုတာ လူတိုင္းသိရွိၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။ အခုဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ေဂၚဖီထုပ္စားသုံးျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမယ့္ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစိမ္းေရာင္ရွိ ေဂၚဖီထုပ္ဟာ ကယ္လိုရီေတြကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ အမွ်င္ဓာတ္ၾကြယ္ဝစြာပါဝင္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လိုအပ္တ့ဲ အာဟာရဓာတ္ေတြသာမက သံဓာတ္လည္း အေျမာက္အျမား ပါဝင္ပါတယ္။ ကိုက္လန္က့ဲသို႕ပင္ ေဂၚဖီထုပ္မွာလည္း တူညီတ့ဲ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ပါဝင္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႕ ကိုက္လန္မစားပဲ ေဂၚဖီေျပာင္းစားမယ္ဆိုရင္လည္း ဆုံးရႈံးမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ေဂၚဖီထုပ္ကိုလည္း ေန႕စဥ္စားသုံးသင့္တ့ဲ အစားအစာစာရင္းထဲမွာ ထည့္သြင္းသင့္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ အစိမ္းေရာင္ေဂၚဖီထုပ္ဟာ က်န္းမာေရးကို ဘယ္လို အေထာက္အကူျပဳလဲဆိုတာကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္။
ေဂၚဖီထုပ္ကို အျခားအသီးအရြက္ေတြနဲ႕ ေရာေႏွာ၍ျဖစ္ေစ၊ သုုပ္၍ပဲျဖစ္ေစ၊ ဟင္းရည္အေနနဲ႕ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ၿပီး စားသုံးလို႕ရပါတယ္။ ေဂၚဖီထုပ္ထဲမွာ ပါဝင္တ့ဲ အမွ်င္ဓာတ္ေတြဟာ အစာေျခစနစ္ကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ကိုလက္စထေရာကို ေလ်ာ့က်ေစရုံသာမက ေသြးထဲက သၾကားဓာတ္ေတြကိုပါ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။
နာတာရွည္ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း။
ေဂၚဖီထုပ္ထဲမွာ Anthocyanins ဓာတ္ပါဝင္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ နာတာရွည္ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္တ့ဲ ေရာဂါပိုးမႊားေတြကို ေလာင္ကၽြမ္းေစႏိုင္ျခင္း၊ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳနဲ႕ ႏွလုံးေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်တို႕ကို ေလ်ာ့က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုလည္း ေလ်ာ့က်ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း။
ေဂၚဖီထုပ္မွာ Glucosinolate ဆိုတ့ဲ Compound ဓာတ္ပါဝင္တာေၾကာင့္ သင့္အစားအစာပမာဏေပၚ မူတည္ၿပီး ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ေဂၚဖီထုပ္ရဲ႕ အစာေခ်ႏိုင္စြမ္းဟာ ကိုယ္တြင္းရွိ Chemical ဓာတ္ေတြမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။
အခုလိုမ်ိဳး က်န္းမာေရးကို အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစတ့ဲ ေဂၚဖီထုပ္ရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို သိရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း သင့္ရဲ႕ ေန႕စဥ္အစားအစာစာရင္းထဲမွာ ေဂၚဖီထုပ္ကို ထည့္သြင္းထားသင့္ပါတယ္ေနာ္ . . .
Previous ကိုယ် ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူတွေကို ချစ်ခင်မြတ်နိ်ုးတဲ့အကြောင်း ဘယ်လိုထုတ်ဖော်ပြသမလဲ ? ? ?
Next ကျန်းမာကောင်းမွန်တဲ့ သည်းခြေအိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အဓိက စားသုံးသင့်သော အစားအစာများ။